Mmiri mmiri: njirimara na nsonaazụ ya | Network Meteorology
N'ezie i nuru nke Jehova oke mmiri ozuzo ma na fim ma n’ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụ ụdị ihe ịtụnanya nwere ike ịkpa ụwa anyị oke njọ ma ọ bụrụ na ọ pụta. Nnukwu obi abụọ na ụdị ihe a na - eme bụ ma ụwa ọ nọ n'ihe ize ndụ nke oke ikuku a ga - awakpo ya.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe oke ikuku mmiri na nsonaazụ ọ ga-enwe na ụwa anyị.
2 Ihe egwu nke oke mmiri ozuzo
3 Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na oke ikuku mmiri gbutere taa?
Oké ifufe nke anyanwụ bụ ihe omume nke na-ewere ọnọdụ n'ihi ọrụ nke anyanwụ. Anyanwụ na ihe ndị ọ na-eme na-egbochi magnetik nke ụwa n'agbanyeghị na kpakpando ahụ dị nnọọ anya na mbara ụwa anyị. Enwere ọtụtụ ndị kwenyere na oke ikuku mmiri enweghị ike imebi ezigbo mmebi, ọ bụ ezie na egosiri ya n'oge ụfọdụ na ha nwere ike. Ihe ndị a na-eme n'ihi ya nke anyanwụ flares na coronal uka ejections. Ihe ndị a na-emepụta ikuku anyanwụ na mgbawa nke ihe ndị na-aga na mbara ụwa anyị.
Ozugbo ọ banyere n'ọhịa magnet, enwere ike ịmepụta oke ikuku mmiri nke nwere ike ịdịru ọtụtụ ụbọchị. N'ime oke mmiri ozuzo anyị nwere ọrụ ndọta n'elu anyanwụ ma nke ahụ nwere ike ibute ntụpọ anyanwụ. Ọ bụrụ na mbara igwe ndị a buru ibu, ha nwere ike ibute ọkụ anyanwụ. Ihe niile a na-arụkarị na ụkwara ume ọkụ sitere na anyanwụ. Mgbe e wepụtara plasma a, ihe nke abụọ akpọrọ coronal mass ejections pụtara.
N'ihi ọdịiche dị n'agbata ụwa na anyanwụ, ọ na-ewekarị ihe dị ka ụbọchị 3 ka ahụ wee rute. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere na ị pụrụ ịhụ na Ugwu Ugwu. Anyanwụ nwere okirikiri nke afọ iri na otu ma ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na elu ebe ha nwere nnukwu ọrụ anyanwụ bụ na 11. Otu n'ime ike mmiri ozuzo kachasị njọ na ndekọ mere na 1859 ma mara amara maka mmemme Carrington. Oké mmiri ozuzo a kpatara nsogbu electromagnetic siri ike na ụwa dum. Enwere ike ịhụ ọkụ ugwu n'ebe ọ na-enweghị ike ịde ya ede. Nnukwu nsogbu bilitere na ngwaọrụ electromagnetic.
Mmiri mmiri ozuzo ndị ọzọ dị obere karị mere n'afọ 1958, 1989, na 2000. Oké ifufe a enwechaghị mmetụta ma enwere ọchịchịrị na mmebi nke Satellites.
Ihe egwu nke oke mmiri ozuzo
Ọ bụrụ na ihe a buru ibu, ọ nwere ike ịkwụsị eletrik na mbara ala. Otu n’ime nsogbu ndị kacha njọ o nwere ike ịkpata bụ na ọ ga-ehichapụ ọkụ eletrik n’ụwa niile. Ọ ga-adị mkpa ịgbanwe wili niile ka ị nwee ike ịnwe ọkụ ọzọ. Ọ na-emetụtakwa nkwukọrịta na satịlaịtị. Anyị enweghị ike ịgọnahụ na ụmụ mmadụ na-adaberekarị na satịlaịtị. Taa, anyị na-eji Satellites maka ihe niile. Agbanyeghị, oke mmiri ozuzo nwere ike ibibi ma ọ bụ mee ka igwe Satellụ kwụsị ọrụ.
Ọ nwekwara ike imetụta ndị na-agụ kpakpando nọ na mbara igwe na ọmụmụ dị iche iche. Oké mmiri ozuzo nwere ike ịhapụ nnukwu radiation. Radieshọn na-emebi ahụike anyị. O nwere ike ibute ọrịa kansa na nsogbu n’ọgbọ n’ọdịnihu. Nsogbu nke radieshon bụ mgbasa ya na oke ya. A na-ekpughere ha ihe niile ka ukwuu ma ọ bụ karịa ka ọ dị na radieshon n'ihi akụrụngwa na eletrọniki. Agbanyeghị, onye ọ bụla nke gosipụtara ogologo oge dị ukwuu nke radieshon, yikarịrị ka ọ ga-apụta site na ụfọdụ ọrịa ndị a.
Ọtụtụ anụmanụ na-echebara mgbanwe nke ndọta nke ụwa echiche, yabụ oke mmiri ozuzo nwere ike ime ka obi ghara iru ha ala. Immụ anụmanụ dị ka nnụnụ nke ndọta magnet na-eduzi iji mepụta njem ha, Ha nwere ike gharịị ma nwụọ, na-etinye ndụ ndụ nke ụdị ahụ.
Ihe ize ndụ ọzọ dị na nke a bụ na ọ nwere ike ịhapụ mba niile n’enweghị ọkụ eletrik ruo ọtụtụ ọnwa. Nke a nwere ike imebi akụ na ụba nke steeti yana ọ nwere ike were ọtụtụ afọ ịlaghachi n'otu ebe ahụ taa. Anyị adaberewo na teknụzụ nke na akụnụba anyị niile gbara ha gburugburu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na oke ikuku mmiri gbutere taa?
Nyere na anyị ahụlarịrị na oké ifufe nke anyanwụ nwere ike ịkwụsị nkwukọrịta na netwọkụ ike ma na-ebute ọkụ eletrik, enwere ike ịsị na taa anyị nwere oke ifufe nke yiri nke ahụ mere na 1859, ndụ ga-akpọnwụ zuru ezu. N'oge oke mmiri ozuzo Carrington, edere ọkụ ọkụ ndị dị na Cuba na Honolulu, ebe a na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri ndịda si Santiago de Chile.
E kwuru na chi ọbụbọ buru ibu nke na a na-eji naanị ìhè nke ụtụtụ agụ akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ akụkọ banyere oke ikuku Carrington ka bụ naanị ịmata ihe, ọ bụrụ na ihe dị otu a ga - eme taa, akụrụngwa nwere ọria ga - akpọnwụ. Dịka anyị kwuburu na mbụ, mmadụ dabere kpamkpam na teknụzụ. Akụ na ụba anyị nwere njikọ chiri anya na ya. Ọ bụrụ na teknụzụ akwụsị ịrụ ọrụ, akụ na ụba na-akwụsị.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ọgba aghara eletrik siri ike dị ka nke mebiri ngwa ọrụ telegraph (nke a maara dị ka ịntanetị n'oge ahụ) ga-adịzi ize ndụ karị. Oké mmiri ozuzo nwere usoro atọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile ga-eme n'oké ifufe. Ihe mbụ bụ na ọkụ anyanwụ na-apụta. Nke a bụ ebe X-ụzarị na ultraviolet ìhè ionize elu oyi akwa nke ikuku. Nke a bụ otú nnyonye anya na-adị na nkwukọrịta redio.
Mgbe e mesịrị-abịa radieshon oké mmiri ozuzo na ọ nwere ike ịdị oke egwu maka ndị astronauts na mbara igwe. N'ikpeazụ, usoro nke atọ bụ nke enwere oke ọnụọgụ ọnụọgụ, igwe ojii nke ebubo ebubo nwere ike iwe ụbọchị iji rute ikuku ụwa. Mgbe ọ rutere na mbara igwe, ihe niile si n’anyanwụ na-eme ka ndọta ụwa na-arụ ọrụ. Nke a na - ebute ngbanwe nke electromagnetic siri ike. Enwere nchegbu banyere ihe ọ ga - esi na GPS, na ekwentị ndị dị ugbu a, ụgbọ elu na ụgbọ ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Oke mmiri
Ihe osise eserese